तपाईंको जस्तै सोच सबैको भयो भने जातीय विभेदको अन्त्य हैन, जातीय लडाइँ सुरु हुन्छ ! – Sandesh Press
June 22, 2021 325
रुपाजी ! तपाईंको निधारमा ‘कमिनी’ भनेर लेखिएको पक्कै थिएन। घरधनीले तपाईंलाई जात सोधेका थिएनन्। तपाईंजस्तो काठमाडौंमा कोठा खोज्न हामीपनी हिंडेको छौँ ।
हामीले पनि कोठा पाएका थिएनौं। अब भन्नुस् म कुन विभेदको मुद्दा हालौं। यहाँ तपाईंको आफ्नो कुनै हिस्सामा भाग नदिएको हैन, आफ्नो जीवनभरीको रगत र पसिनाले बनाएको आफ्नो घरमा कसलाइ राख्ने, कसलाइ नराख्ने उहाँहरुको अधिकारको कुरा हो।
तपाईं चौबीस बर्षकी युवतीले आफ्नो मानहानी भयो भनेर अन्ठाउन्न बर्षको तपाईंको आमा सरहको आमालाई मानहानी गरेर के तपाईंले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नुभयो ? तपाईंले उहाँलाई राम्रोसँग सम्झाउन सक्नुहुन्थ्यो। के तपाईंले जातीय विभेद के हो उहाँलाई सम्झाउनु भयो? कोसिस मात्र पनि गर्नुभयो ?
हामीले विभेद हटाउने भन्ने वित्तिकै जरा किल्ला उखालेर फाल्न सक्छौं तुरुन्तै ? तपाईंले सोच्नु भयो त्यो घरमा उहाँभन्दा ठुलो नागरिक पनि हुनुहुन्छ होला नि ? आफ्नो घरको सदस्यको चित्त दुखाएर निर्णय लिनेे हक उहाँलाई पनि थिएन होला ! एउटा पढे लेखेको तपाईं जस्तो मान्छेले अर्को मान्छेलाई बुझ्न सक्नु भएन।
तपाईंभन्दा पैंतिसौं बसन्त पहिलाको मान्छेले तपाईंलाई चाहिँ थपक्कै बुझिदिनु पर्ने ? तपाईंको जस्तै सोच सबैको भयो भने जातीय विभेदको अन्त्य हैन, जातीय लडाइँ सुरु हुन्छ। आफ्नो अधिकारको नाममा अरुको अपमान गर्ने हक तपाईंलाई पनि कानुनले दिएको छैन।
सामाजिक संजालमा भाइरल भएर हैन, सक्नुहुन्छ भने एकजना मान्छेको नकारात्मक सोचलाई सकारात्मक कसरी बनाउने त्यतातिर लागि भाइरल हुनुहोस्।
Prevभाग्यमानी जतिले मात्र देख्ने यो दु’र्लभ जीउँदो दाहिने शंखलाई बेवास्ता नगरी दर्शन स्वरूप एक सेयर गर्नुहोस् !आफ्नो परिवारको शुख र शान्तिका लागि एक चोटि फोटोलाई छोइदिनुहोला।
Nextभर्खरै सम्पूर्ण काठमाडौंबासीका लागि आयो अत्यन्तै खुसीको खबर।
“विनोद चाैधरीले आईसीयू वार्ड र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न १० करोड रुपैयाँ खर्चिने”
मन्दिर गएको सपना देख्नुभयो ? यस्तो हुनसक्छ संकेत
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (4890)